तिथि मेरो पत्रु » अनलाइन डेटिङ तपाईंको पहिलो कदम चाल्न कसरी
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: जनवरी. 12 2021 |3मिनेट पढ्न
तपाईं प्रवेश लिएको र एक महत्वपूर्ण अन्य अनलाइन लागि देख सुरु गर्न तयार छन् गर्नुभएको. यो एक रोमाञ्चक छ, अझै intimidating अनुभव. अचानक सबै तपाईं हेर्न र थप एकल अन्तरक्रिया गर्ने मौका छ, तपाईंले एक वर्षमा भेट गर्नुभएको भन्दा! तर अनलाइन डेटिङ व्यक्ति मानिसहरू बैठक जस्तै केहि छैन प्रतीक्षा र यो पक्कै पनि नियम पुस्तक छैन आउँछन् ...
यो Vocab बुझ्न: पहिलो र सबै भन्दा भ्रामक कदम को एक lingo सामना छ. यी अन्तरक्रिया आफ्नो पहिलो क्षण हो, छाप कस्तो प्रकारको छोड्न र संसारमा तपाईं के रोज्न सक्छौं चाहनुहुन्छ?
बस "वास्तविक जीवन" मा जस्तै हामी प्रयोग शब्दहरू अन्तरक्रिया एक किसिमको परिभाषित गर्न, हैंडशेक जस्ता, बस दुई मान्छे बीच भएको छ के बुझाउँदै आफूलाई उधारो. यो विचार अझै पनि आफ्नो अनलाइन विकल्प लागू हुन्छ:
जस्तै - यो मार्फत पट्टी देखि एक मुस्कान रूपमा विचार. यो कसैको ध्यान लो सक्छ. तथापि, यो तपाईंमाथि गए र भने जस्तो लागेर रूपमा होइन, "नमस्कार।"
परेलि यो बर्खास्त छ रूपमा -हाम्रो संकेत गरेझैं चाँडै पठाएको छ.
मनपर्ने - यो तपाईं Starbucks मा लाइन मा कुरा व्यक्तिको छ. तपाईं तुरुन्तै एक स्पार्क महसुस; हो तिमी सिर्फ पारित तिनीहरूलाई भेट, तर तिनीहरूलाई फेरि मा टक्कर पर्खन सक्दैन.
सन्देश - यो तपाईं सबै दिन सुन्न पर्खिरहेका गरिएको छ "को" व्यक्ति एक पाठ सन्देश हो. तिनीहरूले तपाईंलाई मा पूर्ण हुनुहुन्छ.
कुराकानी गर्न कसरी एक विकल्प बनाउन तपाईं प्राप्त प्रतिक्रिया को निर्धारित गर्न सक्छन्.
तर्साउन र विस्मित: तपाईं तपाइँको लेखन अघि केही प्रोफाइल पढ्न आवश्यकता भने, कि ठीक छ.
– यो प्रोफाइल मा के समावेश र तपाईं अनलाइन डेटिङ गर्न नयाँ हुनुहुन्छ भने कति थाहा गर्न कठिन छ. तपाईं एक हाइकु लेख्न चाहँदैनन्, तर तपाईं आफ्नो5औं कक्षा पियानो वादनमा को विवरण संग आँसु बोर मानिसहरूलाई चाहँदैनन्.
– व्यक्तिगत विवरण पक्का दिन गर्नुहोस्, चलचित्र प्रेम र जो 'एक हजार मानिस त्यहाँ अपराध मा एक साथी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ हो,'तपाईं बारेमा वास्तवमा विभिन्न के? (तपाईं केक स्कूल जाने थियो र अब मार्केटिङ काम. सायद, तपाईं हाल parasailing उठाउनु?)
– तपाईं एक साथी मा के खोज्दै हुनुहुन्छ परिभाषित, यदि तपाईं नहीं मान्छे आफ्नो प्रोफाइल नक्कली छ सोच्न सक्नुहुन्छ.
निडर: तपाईं एक Wallflower नहुन अनलाइन डेटिङ सामेल भएका, तपाईं कुनै लगाउन चाहन्छौं!
– तपाईं गुमाउन केही छैन! तपाईं यो व्यक्ति चलान हुनेछ संभावना के हुन्? कुनै पनि शून्य; तिनीहरूलाई परेलि छैन, तपाईं वास्तवमा सन्देश गर्न चाहनुहुन्छ भने.
– तपाईंको भित्री पक्कै जीत गरौं गर्छन्. के तपाईं इच्छुक हुन सक्छ जो थाहा कहिल्यै, तपाईं यसलाई प्रयास गर्नुहोस् नभएसम्म. तपाईं कुनामा बस्न अनलाइन डेटिङ सामेल थिएन र बुनना तपाईं गरे? तपाईं गरे भने, म तपाईं गलत वेबसाइट मा हुन् जस्तो लाग्छ.
नयाँ कुरा प्रयास: "आफ्नो प्रकार जान्नु संग केहि पनि गलत छ,"तर आफ्नो अतीत सम्बन्ध फरक छ जो संग कुरा प्रयास.
तपाईं आफ्नो चमक कम्प्युटर स्क्रीन देखि देख विकल्प हजारौं हुँदा, के तपाईं चाहनुहुन्छ सिक्न पानी परीक्षण गलत केही छ. सायद, तपाईं एक जोकर र महसुस संग डेट मा जाने, "म सिर्फ एक जीवित लागि आफ्नो नाक honks गर्ने कसैसित हुन सक्दैन।" त्यहाँ भनेर गलत केही छ, या शायद तपाईंलाई सबै साथ लागि प्रतीक्षा गरिएको छ के सिक्न. तपाईं हुन सक्छ के थाहा कहिल्यै.
आफूलाई हुनुहोस्: ड. Seuss यो राखे, "म हुँ जो छु र हुन ठूलो कुरा हो।" भने डा. Seuss यो भने, यो सही उठ्यो गर्नुपर्छ. यो तपाईं कुनै हुन बहाना गर्न खोज्नु भने कसैसित सम्बन्ध सुरु गर्न गाह्रो छ.
हो "hottie8675309" एकदमै आकर्षक छ, तर तपाईं साधारण मा छ आफ्नो प्रोफाइल मा केहि पाउन सक्दैन. तपाईं आफैलाई लाग्छ, "राम्रो तिनीहरूले 'नामक्रोधको अंगूर ' आफ्नो मनपर्ने पुस्तक. म उच्च माध्यमिक विद्यालयमा भनेर पढ्न लाग्छ। "तपाईं यो थाहा अघि तपाईं 'मा आफ्नो पीएचडी प्रबंध लेखे गर्ने कसैसित मिति हुनुहुन्छक्रोधको अंगूर। ' कि संग शुभकामना!